Waa maxay font-ka Netflix? | Hal-abuurka khadka tooska ah
Waa maxay font-ka Netflix?
Calaamadda waxaa lagama maarmaan ah in la helo aqoonsi si fiican loo qeexay, tani waxay hubin doontaa in macaamiishu ay ka sooci karaan tartankeeda oo xitaa cuni karaan. Dadweynuhu kaliya kuma qiimeeyaan astaanta waxa ay bixiso ama qiimaha, waxay sidoo kale eegaan walxaha muuqaalka ah ee ka kooban, sida midabada, qoraallada, astaanta, iwm. Waxay raadiyaan calaamaduhu waxay ku xidhmaan qaab nololeedkooda markaa dhinacyadan aan soo sheegnay ayaa go'aaminaya isku xirnaanta la sheegay.
Maanta Netflix waxaa loo yaqaan mid ka mid ah Goobaha baahinta tooska ah ee hogaaminaya mid ka mid ah buugaagta ugu weyn ee nuxurka maqalka laakiin maaha oo kaliya adduunka maqal-muuqaal laakiin iyada oo loo marayo ololaheeda isgaadhsiinta iyo hal-abuurkeeda, waxay noqotay mid ka mid ah noocyada ugu awoodda badan suuqa.
Thanks to this isgaarsiinta cajiib ah, aan xasuusanno ololihii caanka ahaa ee Madrid ee Puerta del Sol "Oh White Christmas" markii taxanaha Narcos noqday mid ka mid ah taxanaha ugu daawashada badan, shirkaddu waxay ku soo bandhigtay mid ka mid ah falalka ugu kicinta ee la xasuusto . Iyada oo ficil noocan oo kale ah hel habka ugu habboon ee aad ugu dhawaan lahayd dadweynaha.
Isaga oo sii wata fikraddan, ee ah isku xidhka dadweynaha, waxa uu qaaday tallaabo dheeraad ah oo uu sameeyay qoraal u gaar ah; netflix typography: Netflix Sans.
1 Nabadgelyo Gotham
3 Netflix Sans: qoraal fudud oo nadiif ah
Netflix waxay macsalaamaysay saaxiibkeed aaminka ah Gotham, oo ah nooca caadiga ah ee adduunka naqshadeynta. Far-qoraalka caadiga ah oo ujeeddadiisa ugu weyn ay ahayd in la fududeeyo awood-siinta qaybaha isgaadhsiinta ee loogu talagalay dhammaan warbaahinta ay ololahani ka soo muuqdeen.
Raadinteeda joogtada ah ee isbeddelka, Netflix wuxuu ku boodaa bandwagon-ka ay shirkado badani ku qanacsan yihiin, mid weyn iyo mid yarba, mana aha mid kale marka laga reebo samee qoraal-qoraalkaaga gaarka ah, nooc gaar ah.
Habka abuurista farta gaarka ah ee astaanta ayaa ah mid tartiib tartiib ah oo joogto ah oo isbeddelaysa, Netflix waxay dhamaystirtay marxalado waxayna ka shaqaynaysay mid kasta oo iyaga ka mid ah aqoonsigeeda muuqaal ah, waxaas oo dhan had iyo jeer ilaalinta qiimahooda.
Oo waxaad odhan doontaa, intee baad ku dhiiran tahay inaad abuurto qoraal adiga kuu gaar ah? Miyaanay khatar badan ahayn? Waa hagaag ma aha ka kaliya ee lagu horumariyo far-qoraal caado ahMuddo yar ka hor, noocyada waaweyn sida Coca Cola, IBM ama madal YouTube ayaa sameeyay.
Waa macquul in shirkad weyn sida midda aan ka hadlayno, Netflix, oo leh guul weyn oo ay ka dhex abuurto dadweynaha, ay rabto. ka soocaan noocyada kaletartanka iyo in kale. Awoodda lagu bixinayo nuxur maqal muuqaal ah oo tayo sare leh iyada oo aan la helin nasasho ganacsi waxay Netflix ka dhigtaa heer ka sarreeya warbaahinta caadiga ah ee aan ognahay maanta.
Abuuritaanka summadaada waa kobcinta aad u baahan tahay si aad u abuurto aqoonsi garaaf gaar ah. Qoraalka Netflix; Netflix Sans, waa a wax la akhriyi karo, fudud oo nadiif ah, kaas oo kaa caawinaya in xidhiidhkaagu noqdo mid laga fahmi karo dhammaan warbaahinta, labadaba online iyo mid daabacan.
Marka la samaynayo farta ay shirkadu raadinaysay, laba arrimood oo muhiim ah ayaa la tixgeliyey: bilicda iyo shaqaynta. Saamiga xarafkiisa xarafkiisa sare waxay raadiyaan bilicda kinematics iyo xarfaha xarfaha yaryar waa kuwo is haysta oo hufan.
Qofka mas'uulka ka ah naqshadeynta Netflix, waa Nuux Nathan wuxuuna sharxayaa in go'aanka lagu galo adduunka abuurista aqoonsigeeda ay ka jawaabto laba dhinac. Midka ugu horreeya oo aadka muhiimka u ah waa in la bixiyo, si loo abuuro wax gaar ah, a shakhsiyadda gaarka ah ee astaanta Oo ka dhig mid gaar u ah Netflix. Iyo dhinaca kale, marka labaad, ee dhimista kharashka Waa maxay sababta loo dhimay haddii Netflix ay tahay shirkad weyn? Aad bay u fududahay in laga jawaabo. Netflix waxay si joogto ah u fulisaa ololeyaal xayaysiisyo badan iyo meelo kala duwan iyo dalal kala duwan, markaa haysashada aqoonsigaaga ayaa kaa caawinaysa inaad hoos u dhigto kharashka, sababtoo ah haddii aad isticmaasho font caadi ah, shatiyadu aad bay qaali u yihiin sababtoo ah ololayaashu waa caalami.
Labadan doodood, si ay u abuuraan aqoonsigooda iyo si ay u badbaadiyaan kharashaadka, waa isla sababaha keenay in noocyada kale ay qaataan boodhkan.
Netflix Sans: qoraal fudud oo nadiif ah
Kooxda nashqadaynta ee bilaabay in ay farta farta ku shaqaysiiyaan waxa ay ku xisaabtameen dhawr arrimood oo ay ka mid tahay cabbirka shaashada filimada marka la samaynayo xarfaha waaweyn iyo qodobka kale oo ah in xarfaha yaryar ay noqdaan kuwo is haysta oo la akhriyi karo. luntay. Labadan fikradood ee bilowga ah ee cad, a qoraal buuxa oo leh miisaan kala duwan: madow, geesinimo, dhexdhexaad, joogto ah, khafiif ah iyo dhuuban.
Wax walbaa kuma sii jirayaan qaab qoraal ah oo fudud oo nadiif ah, laakiin waannu heli karnaa quirks iyada. Haddii aan eegno xarafka yar ee t, qalooca ayaa ka muuqda tiirka koraya ee sare kaas oo, sida ay sheegeen abuurayaashiisa, waxaa dhiirigeliyay qalooca shaashadaha filimada.
Isku soo wada duuboo, waxaanu rabnay inaanu samayno qoraal qoraal ah oo leh qaab aasaasi ah, fudud, oo ay si cad uga go'an tahay hawl-qabad iyo xalaalayn. baabi'inta xad-dhaafka ah ee u janjeera carqaladaynta dadweynaha.
Qaybtan naqshadaynta, sida qoraal-qoraalka, waxay u ekaan kartaa mid kale inta lagu guda jiro, laakiin runtii waa mid ka mid ah Qodobbada ugu muhiimsan marka la wada hadlayo oo ku xidhidh dadweynaha. Si miyir la'aan ah, fariimaha waxaa loo gudbiyaa macaamiisha taas oo saameyn karta macnaha ama aragtida nuxurka iyaga.
Qalabka maqalka iyo muuqaalka ah, Waa halkan inaan joogno oo waxay ku guulaysatay inay qabsato guryaheenna. Ma aha oo kaliya sababtoo ah nuxurka weyn ee ay na siiso, laakiin sidoo kale waxaa mahad leh isbeddelkan aan ka hadalnay, dhisidda calaamad u gaar ah oo ku xiran dhammaan daawadayaasha iyada oo loo marayo qaab dhow oo gaar ah.
Netflix waxay noqotay a tixraaca adduunka ee shaashadaha laakiin sidoo kale in dunida of branding mahad horumarinta brand guul, qaadashada boodada iyo xuduudaha.
Farta Netflix, Netflix Sans, waxay leedahay aqoonsi u gaar ah, laakiin waligiis ma xukumo waxa ku xeeran, dhamaadka typography iyo canaasiirta kale waa inay wada noolaadaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Waa maxay font-ka Netflix?
Majaladaha naqshadeynta garaafyada ugu fiican
Waa maxay saamaynta parallax